Solovava · Janoary, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Solovava · Janoary, 2019
Tantara mikasika ny Solovava tamin'ny Janoary, 2019
Iran: Bilaogera iray hafa any am-ponja
(Marihina fa tamin'ny volana Janoary 2012 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Nilaza i Hadi Nili fa araka ny tatitra voamarina avy ao Tehran dia nosamborin'ny manampahefana i Parastoo Dokouhaki, Vehivavy bilaogera Iraniana sady mpanao gazety. Mpikatroka ihany koa i Parastoo. Nanoratra tao amin'ny bilaoginy “Zan-Nevesht ” izy ary tamin'ny teny Anglisy “...
Shina28 Janoary 2019
Tafatafa miaraka amin'i Eman AbdElRahman
Hafanam-po26 Janoary 2019
Mamoaka lahatsoratra ao amin'ny bilaoginy manokana Lasto Adri [ar] sy ao amin'ny On My Own [en] ihany koa izy. Azo jerena ao amin'ny Twitter, @lastoadri ihany koa izy.
Ejipta26 Janoary 2019
Voasazy omaly ilay bilaogera Ejypsiana Tamer Mabrouk, tsy voasazy higadra any am-ponja fa voasazy handoa onitra L.E. 2500 (446 dolara Amerikana, ary fanarenana sivily L.E. 40.000 (7272 dolara). Nohamifisin'ny Fitsarana Ambony any Port Said (Lakan-drano Suez) ny fanapaha-kevitra hanasazy ny bilaogy Al-Hakika Al-Mesreyya.
Ejypta: Nampiakarina fitsarana ambony ny sazy fanagadrana bilaogera iray
Nampahafantarina androany ny fampakarana ho any amin'ny ambaratonga ambony ny sazin'ilay bilaogera Ejiptiana Ahmad Saad Abou Doma. Nangataka ny hanafoana sazy an-tranomaizina herintaona sy nangataka fitsarana vaovao ho an'i Doma ny ivon-toerana Hisham Mubarak
Ejipta23 Janoary 2019
Iràna23 Janoary 2019
Miantso ny famotsorana an'i Hamed Saber ireo mpianatra nahazo diplaoma tao amin'ny oniversite Iraniana sy akademika maherin'ny 70, izay Iraniana bilaogeran-tsary sady mpahay siansa momba ny solosaina nosamborina noho ny antony tsy fantatra ny 21 Jona 2010 tany Teheran.
Singapaoro23 Janoary 2019